विचार/ब्लग Archives - Khula Patra
मंगिता नेपाली, विद्यमान सामाजिक परिवेशमा पुरुषलाई हेर्ने पितृसतात्मक सामाजिक दुष्टिकोण भिन्नै छ । हाम्रो समाजमा पुरुषलाई शक्तिशाली, बहादुर, पौरखी, रक्षक, त्यागी, बुद्दिमान जस्ता अनेक पर्यायवाची शब्दबाट चिनाइएको छ । यहाँ प्रश्न आउँछ, वास्तवमै पुरुषमाथि उल्लेखित सम्मानित शब्दावालीको लायक छन त ...
गोविन्द नेपाली, नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या नभएको पनि होइन। राणाकालदेखि स्कुल कलेजहरू खुल्दै आएका छन्। त्यसका लागि राज्यको ठूलै लगानी भएको छ। शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन भइराखेका छन्। यो राष्ट्रका लागि राम्रो पक्ष हो। तर, हालसम्म कुनै रैथाने सीपमा आधारित विश्वविद्यालयको स्थापना हुन सकेको छैन। ...
निस्कल राई, मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको राज्यव्यवस्था अंगालेपछि दोस्रो पटक २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन घरदैलोमा आइसकेको छ, हामी पनि निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छौँ । गएको स्थानीय तह निर्वाचनको तथ्यांकलाई फर्केर हेर्दा इलाममा मात्र होइन, मुलुकभर हाम्रो...
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराई सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय नेता मानिन्छन् । हरेक समसामयीक गतिविधिमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्छन् । ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनी आफ्नो जिल्लाका त ससाना विषयसमेत फेसबुक, ट्वीटरमा अपलोड गरिहाल्छन् । यसले आफ्नो जिल्लाका विषयमा...
भीम माबुहाङ, मुर्दा बोक्नेले कुम फेरे जस्तै– वाद, तन्त्र, व्यवस्था र राजनीति दलहरु फेरिरहे । तर, हाम्रो जीवन फेरिएनँ, फेरिएको छैन । देशमा आन्दोलन, क्रान्ति र युद्वका हावा–हुरिहरु चलिरहे । तर विकाश र समृद्धिका झोकाहरुले हामीलाई कहिले छोएनन् । भोट हान्दा–हान्दा औंलाका चक्रहरु झरिसक्न आँटे ।...
दिपा नेपाली, जातीय विभेद कसको सरोकारको विषय हो ? यो प्रश्न कसलाई गर्ने ? मानव संवेदनशीलतासँग जोडिएको यस्तो गम्भीर प्रश्नको जवाफ कसले दिने ? जबकि सरकार यस विषयमा सधैँ निरीह छ । जातीय विभेदका घटनाको दरलाई विश्लेषण गर्दा यस विषयमा सरकार गैरजिम्मेवार छ भन्ने प्रष्टै झल्किन्छ । र नागरिक स्वतन्त...
मुक्ति समाजको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलन सफल पारौँ
- अनुभूतिबम नेपाली, संगनको पृष्ठभूमि नेपालको उत्पीडित दलित मुक्ति आन्दोलनले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको उन्मुलन गर्न विभिन्न जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म संस्कृतिका आधारमा गरिने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै सामन्ती अधिसंरचनामा आधारित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सां...
‘समावेशीबाट लड्नु मेरो बाध्यता हो’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले दलित समावेशीतर्फबाट सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। परियार विद्यार्थी संघको सदस्य भएर २०४६ को जनआन्दोलनमा सहभागी भएका थिए। ०४८ देखि ०५४ सम्म उनी नेविसंघबाट राजनीतिमा सक्रिय रहे। २०५५ सालमा नेपाल दलित संघ कास्कीको संस्थापक सचिव बने। त्यस्तै, उनी पछिल...
एमाले महाधिवेशनबारे पद्मा अर्याललाई चार प्रश्न
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशन शुक्रबारबाट चितवनको भरतपुरमा सुरू हुँदैछ। उपाध्यक्ष भीम रावलको उम्मेदवारी घोषणाले केपी शर्मा ओलीको सर्वसम्मत अध्यक्षतालाई चुनौती दिएको छ। अन्य पदाधिकारीमा पनि निर्वाचन हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। अन्तिम समयमा एमाले केन्द्रीय सदस्य पद्मा अर्याललाई हामीले च...
पढदै गरेको अखवार टेवलमा ठप्प राखेर, अलि अलि मुस्कुराउँदै, कुर्सी बसिराखेको छ ठुले । केसरी, हातमा चिया लिएर ठुले भएको ठाउँतिर अगाडी बढछे । केसरी- के भयो ठुले, पागल जस्तै एक्लै हाँस्दै बसिराखेको छौ नि ? अफिस जाने टाईम भएन भन्या ? ठुले- केसरी, आज कस्तो अनौठो सपना देखे ! हेर न । मकालु हिमालले मला...
-डा.शेखर कोइराला, नेपाली कांग्रेस पुरानो अवस्थाको नहुँदा सबै कार्यकर्ता चिन्तित छन्। पार्टी १४औं महाधिवेशनको संघारमा छ। पार्टी कसरी कुन रुपमा अगाडि बढ्दछ, चिन्ता सबैलाई छ। जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद छ। अन्य दलबाट कांग्रेसमा आएकाहरूको समायोजनको विवाद पनि छ। नयाँ क्रियाशील सद...
हिजो आफुले संसद र संबिधानको बारम्बार गरेको हत्या प्रयासको कामलाई सर्बोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिसके पछि क्रुद्ध भएकि रास्ट्रपति भण्डारीले अब राजिनामा दिएर बस्नु राम्रो हुन्छ । लज्जाबोध कुण्ठित एबं आग्रह र पुर्बाग्रह राखेर आत्माग्लानीका साथ शिथिल निवासमा बस्ने नैतिक अधिकार रास्ट्रपतिमा छैन । शितल ...
बहुदल घोषणा भएयता पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुममा हरेक पटकको चुनावमा नेपाली कांग्रेस 'पाहा' पछारिए झैँ पछारिएको–पछारिएकै छ । कोयाखोला, खोरुङ्गाखोला, पिंगुवाखोला अनि लिम्बु खोलाहरुमा धेरै पानी बगिसके । तर, कांग्रेसको हारेको–हारै छ । तेह्रथुमे जनताको थप्पड खाएको खायै छ । आखिर तेह्रथुममा सधैँ रुख ढलिर...
नेपाली कांग्रेस पार्टीले अवलम्बन गरेको विचारको धार अहिले नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै सर्वमान्य छ । २००३ सालमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ सालमा नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बन्यो । दुवै कांग्रेसले राणा शासनविरुद्ध आन्दोलन गर्न २००६ सालमा बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद आत्मस...
काङ्ग्रेस रूपान्तरणको वैचारिक विमर्श
कांग्रेसभित्र भएको आपसी भ्रातृत्व कायम गुर्न अहिलेको अहिलेको आवश्यकता हो । सधैँ गुटबन्दीमा रुमलिँदा प्राप्त उपलब्धि पनि जोखिममा धकेलिँदै छन् । गुटको अन्त्य गर्दै पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन अतिआवश्यक भएको छ । बिरासत बोकेको पार्टी अहिले कमजोर किन भयो ? अब यसतर्फ पनि गम्भीर हुनुपर्ने समय आएको छ । मूल ...
कांग्रेस महाधिवेशनका केही सम्झना
झण्डै ७ दशकपहिले अर्थात २००६ चैत १४ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काँगे्रसको संयुक्त अधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस जस्तो एक ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना भएको हो। त्यसपछि २००९ जेठ १० गते जनकपुरमा सम्पन्न पाँचौँ अधिवेशनबाट जननायक बिपी कोइराला नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति ...
लकडाउन खोल्ने निर्णय अर्को ठुलो दुर्घटना हो: डा.बासुदेव पाण्डे [अन्तर्वार्ता]
डा. बासुदेव पाण्डे, भाइरस विज्ञ विश्वभर कोरोनाको दोस्रो छालको समाप्ती सँगै तेस्रो छालको कुरा उठिरहेको छ, हामी कतिको जोखिममा छौँ ? कोरोना बिरुद्ध बिजय प्राप्त गर्न हामीले खोप लगाउँन सकेनौं । हाल सम्म पहिलो डोज खोप लगाउने ६ प्रतिशत र दोस्रो मात्रा लगाउने नागरिक २ प्रतिशत मात्रै छन् । करिब तीन कर...
कांग्रेस महाधिवेशनको सुनिश्चितता
नेपाली कांग्रेस नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय हो। कांग्रेसकै नेतृत्वमा मात्रै देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। नेपाली कांग्रेस वास्तवमा लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार हो । मुलुक संकटमा पर्दा कांग्रेसले नै पार लगाउने गरेको छ । तर, यतिबेला कांग्रेस आफैँ असहज अवस्थामा छ । कांग्रेसले २०७८ भदौ मसान्...
कस्तो थियो बिपी र सुवर्णशमशेरको सम्बन्ध ?
- प्रदीप गिरि, ०१५ मा नेपाली कांग्रेसले सरकार बनायो । यसका नेता बिपी कोइराला नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो । झन्डै १८ महिनाको कांग्रेसको त्यो शासनकाल उल्लेखनीय रह्यो । नेपाली कांग्रेस आफ्नो सफलताको उत्कर्षमा थियो । त्यस समय नेपाली कांग्रेसका चार नेता थिए । नेपाली कांग्रेस...
मुलुकमा पछिल्लो समय समानुपातिक समावेशीसँगै उत्पीडित समुदायलाई विशेषाधिकारको अभ्यास भइरहेको छ। नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक इतिहास हेरी वर्तमानमा जे अभ्यास भइरहेका छन्, सामाजिक न्यायका दृष्टिले यी नितान्त आवश्यक थिए। पछिल्ला परिवर्तनका श्रेय लिन देशमा विभिन्न पार्टीले आ–आफ्नै डम्फ...
डा. कृष्णप्रसाद पौडेल कोभिडको नयाँ भेरियन्टको कारण शैक्षिक क्षेत्र यसको मारमा छ र सबैभन्दा बढी असर बालबालिकाको पढाइमा परिरहेको छ । अहिले विद्यालय (वाल कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म) जाने बालबालिकाको संख्या करिव ७५,००,००० (पचहत्तर लाख) र उच्च शिक्षा तहमा करिव (प्राविधिक र व्यवसायिक सहित) ५,००,०० (पाँच ल...
नेपाली समाजलाई विभाजित गराएर द्वन्द्वमा धकेल्दै पछौटे बनाएको हिन्दु वर्ण र जात व्यवस्थामा आधारित जातीय विभेद र छुवाछुत दलित जनताको निरन्तर प्रतिरोध र बलिदानपूर्ण संघर्षका कारण राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने तहमा आयो । र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित संसद्ले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र र सर...
डा. कृष्णप्रसाद पौडेल हरेक नेपाली जो विदेशमा बस्छ वा नेपालमा नै छ उसको मनमा नेपालमा भैरहेको प्राज्ञिक कसरत (Academic Exercise) माथि यी प्रश्नहरू उठ्न सक्छन ! (१) के नेपालमा अनुसन्धान नभएको नै हो त ? (२) प्राज्ञिक उत्खननमा नेपालको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? (३) नेपालमा भएका अनुसन्धानलाई किन जीवन र ज...
गैरजिम्मेवार मेरो देशको सरकार !
- टेकबहादुर विश्वकर्मा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले अक्सिजनसमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । बल्लतल्ल विदेशबाट श्रमजीवी कामदारले पठाएको अक्सिजन सिलिन्डर सबैभन्दा पहिले सांसद र सत्ताका मालिकहरू प्रयोग वा दुरुपयोग गर्छन् । तिनलाई जनताको जीवनसँग कुनै सरोकार छैन । यस्तो महामारीमा जनताको ...
यी आनीबानी, जसले तपाईको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउँछन्
डा.हेमराज कोइराला, विश्व कोभिड–१९ को महामारीले आक्रान्त भइरहेको छ । चीनको हुवई प्रान्तको बुहान शहरमा सन् २०१९ को उतरार्धमा देखिएको कोरोना भाईरसको नविन प्रजातीले आज संसारलाई हायलकायल बनाएको छ । आज यस महामारीबाट कुनै पनि देश अछुतो छैन । अत्यन्त तीब्र गतिमा फैलनसक्ने क्षमताको यस रोगले हाल सम्म ३...
दिपा नेपाली, नेपोलियन बोनापार्टले भनेका छन्, ‘मलाई एक असल आमा देऊ, म तिमीलाई एक राष्ट्र दिनेछु ।’ बोनापार्टकाअनुसार एक असल आमाले जन्माएका सन्तानले असल राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छन् । असल समाज र देश निर्माणमा असल आमाको भुमिकालाई प्रष्ट पारेको छ उनको यो उक्तिले । आज आमाको मुख हेर्ने दिन । सबै सन्...
हिजो आज आँखामा निन्द्रा कम छ । सपना ज्यादा भएर होला, रातको समय अक्सर छट्पटि मै बित्छ । मनलाई राहत अनि आँखालाई निन्द्राको कामना गर्दै रातको धेरै समय फेसबुक, इन्स्टाग्राम स्क्रोल गरेरै व्यतित भइरहेका छन्, साथमा युट्बले दिएको साथ त छुटाउनै मिल्दैन । अचेल प्रविधिले हामीलाई कति माथि पुर्‍याएको छ । मन ...
काठमाडौं । पुस १७ गते राति पौने ९ बजे बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको अम्रेनी–चिसापानी सडकखण्डमा मोटरसाइकलमा सवार नन्दकला थापालाई पाटेबाघले झम्टियो। बाघले थुतेर लगिएकी लम्कीचुहा नगरपालिका–४ की ५२ वर्षीया थापाको शव अर्को दिन भेटियो। घटनामा मोटरसाइकल चलाइरहेका थापाका छोरा घाइते भए। लगत्तै बर्दिया राष्...
किरण गिरी, २००७ सालदेखि २०४६ हुँदै २०६२/०६३ आन्दोलनमा इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसको अग्रणी भूमिका छ। जनयुद्धको अन्त्य, हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभाको निर्वाचन तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणामा नेपाली कांग्रेसको भूमिका नेतृत्वदायी रहेको थियो। कांग्रेसकै कारण शान्ति प्रक्रिया र संविधा...
कांग्रेसले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि तत्कालै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावादी कदम भएको भन्दै विरोध गरेको थियो । तर, त्यसमाथि थप रणनीति तयार गर्न ७ पुसदेखि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्ने कि नगर्ने ? भन्नेमा नेताहरूबीच विवाद भएको थियो । पार्टीभित्रको दबाब र...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन गरेको विषयमा कांग्रेसभित्र कुनै खालको द्विविधा छैन । ओलीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेको केही घण्टामै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त कदमलाई असंवैधानिक भनेका छन् । ...
कोभिड-१९ महामारी अगाडि विदाका दिननजिकका गन्तव्यमा पुगेर रमाउने प्रचलन झांगिएको थियो। महामारीले मानिसलाई घरभित्रै कैद गरिदियो। कोभिड-१९ विरुद्ध खोप पनि धमाधम स्वीकृत हुने चरणमा छन्। ती खोप विश्‍वव्यापी रूपमा उपलब्ध भएपछि एकपटक फेरि पर्यटन उद्योगले गति समात्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसपटक पर्यटनको श...
- पवित्रा घिमिरे, ‘महिला भएर पनि यस्ता कुरा गर्ने ?’ केहीअघि एक पुरूष मित्रले मलाई भन्नुभयो। सन्दर्भ थियो, लेखक तथा राजनीतिज्ञ मोदनाथ प्रश्रितलाई एक महिलाले लगाएका संगीन आरोपहरू। मैले प्रश्रितका धेरै लेख र पुस्तकहरू पढेको थिएँ। उनका लेखहरूमा ‘नारीवादी चिन्तन’ पाउँथें। उनै लेखकमाथि त्यस...
हामी सबैलाई थाहा छ, कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले आफ्नो पुँजी विस्तार गर्न इनिसियल पब्लिक अफरिङ (आईपीओ) जारी गर्छ। जसलाई साधारण सेयर पनि भनिन्छ। कम्पनीले जारी गर्ने सेयर कित्ता संख्याभन्दा आवेदन दिने सर्वसाधारणको संख्या धेरै हुँदा सबैको हातमा आईपीओ पर्दैन। परे पनि १० कित्ता पर्छ, त्यो पनि चिठ्ठामा...
नेपालमा राजनीतिक पार्टी हैन, अब दलालहरु मात्र बाँकी छन् : मोहन चापागाँई
मोहन चापागाई, राजनीतिक अगुवाका रुपमा चिनिनुहुन्छ । कुनै दल विशेषभन्दा पनि आफुलाई नेपाली हुँ भनेर चिनाउन रुचाउने चापागाई वैचारिकरुपमा म कुनै पनि वाद वा विचारहरु मान्दिन भन्नुहुन्छ । माक्र्सवाद भनेको केहिपनि नभएर एउटा धर्म जस्तै दर्शन हो भन्ने चापागाई केवल नेपालवादको समर्थन गर्नुहुन्छ । ‘नेपालवाद’ न...
तालिमको शिलशिलामा केही वर्ष अगाडि अष्ट्रेलिया जाने साइत निस्कियो । लगभग अपरान्ह १ बजे तिर हामी पश्चिम अष्ट्रेलियाको मुख्य शहर पर्थको अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलमा अवतरण भयौं । गोर्खाली प्रशिक्षणको लागि अष्टे्रलिया आएका हुन् भन्ने कुरा अध्यागमनमा जानकारी भएपछि हामीलाई खासै सोधखोज नगरिकन फटा-फट पासप...
- प्रकाश पाक्साँवा, निक्कै नाम चलेका हिमाली भेगहरुमा पर्ने बस्तीहरुमध्ये तोक्पेगोला पनि एक हो । प्राकृतिक सुन्दरतासँगै हिमालको काखमा रहेको यो क्षेत्र धेरैको रुचिको गन्तव्य हो । रुचि मेरो पनि थियो, जीवनमा एक पटक कुनै न कुनै बेला यो ठाउँको भ्रमण गरौँ भन्ने । अहिले घुमफिर गरौँ लाग्ने परि...
खग्रास परेको दिन
- चन्द्र इङनाम, अरुभन्दा फरक थियोे आठराई । तत्कालीन देशको शासन व्यवस्था निङ्कुश सामन्त पद्धतिबाट सञ्चालित भएपनि त्यहाँको सामाजिक र राजनीतिक माहोल अरु ठाउँको भन्दा फरक थियोे । खुल्ला ठाउँमा हावा कम भएपनि सास फेर्नु सरल भए जस्तै, देशको शासक र शासन पद्धति साँघुरो भएपनि आठराईको ...
- भीम माबुहाङ, निर्माण कार्य पुणर् रुपमा सम्पन्न नहुँदै निकै व्यापक रुपमा चर्चा र परिचर्चामा आउन सफल पार्क हो ‘चो?लुङ पार्क’ । अहिले देशैभरि पार्क बनाउने लहड चलेको छ, तर तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको वसन्तपुर वजार नजिकै रहेको यो पार्क अरुभन्दा फरक छ । सामाजिक संन्जाल र सन्चार साधनहरुको ध्यान ...
– भीम माबुहाङ, पुर्वको आईकनिक सहर धरानबाट तिन घण्टाको उकालो उतर यात्रा लाई धकेले पछि पुगिन्छ पहाड़की रानी वसन्तपुर बजार । कथाले मागेपछि अभिनय गर्नु पर्छ भने झैैं यहाँको चिसो मौषमको माग अनुसार तातो तोंगवा र रसिलो सिकुटी नचपाई ज्यानमा रक्तसंचार हुन गार्हो हुन्छ । वसन्त ऋतुमा हो भने लाल...
- नृपबहादुर सुनार देशकै पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन आगामी फागुनमा हुँदैछ । सोहीअनुसार पुष महिनाभित्र वडा, क्षेत्र, जिल्ला र प्रदेश कार्यसमितिको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यतिबेला क्रियाशिल सदस्यता वितरणका लागि फाराम जिल्ला जिल्...
बाबालाई ‘खुला पत्र’
आदरणीय बाबा, धेरै माया अनि सम्झना। विश्व नै कोरोना महामारीले आक्रान्त हुँदा प्रकिृति र परिस्थिति माथि मानव जगतको औकात नगन्य रहेछ भनी भोग्दैछु। यो असान्दर्भिक पल र यसले निम्त्याएको कठिनाई र तनाब जगजाहेर छ। त्यति मात्र होइन, यी दिनहरूमा बलात्कार, हिंसा, हत्या र आत्महत्याका डर लाग्दा तथ्...
बाबुराम गौतम नेपाली समाज आधुनिक ज्ञान, सीप, प्रविधि र वैज्ञानिक चमत्कारहरुको अलवा पनि रुपान्तरित हुन सकेको छैन।शिक्षामा अग्रगामी छलाङ्ग मारी विकास गरेता पनि संस्कार युक्त शिक्षामा नेपाली समाज पछि परेको देखिन्छ। समाजमा घरेलु हिंसा, वालहिंसा, छुवाछुत, दलित हिंसा, बलात्कार, एसिड आक्रमण जस्ता सा...
- चन्द्र इङनाम नेपालको पूर्वाञ्चलमा अबस्थित चर्चित स्थानहरूमध्ये आठराई सक्रान्ति बजार पनि एक हो । तर यसले चर्चाअनुसारको विकास चाहिँ पाएको देखिदैन । आठराईले धेरै जनालाई शिक्षाको आँखा दिएको छ । विशेष यसले राजनीतिक व्यक्तित्वहरू जन्माएको छ । अहिले पनि देशकै माथिल्लो ओहदामा आसीन छन् । ...
‘पैदल होस् वा गाडी, वसन्तपुरबाट उकालो लागेपछि रातो फुलको कार्पेट माथि हिंडेको अनुभूति हुन्छ । माथि उक्लिएपछि मेन्छ्यायेमको चुचुरोबाट आँखा डुलाउँदा टाढा-टाढाका हिमालहरु आफुलाई नै हेर्न उभिए जस्तो लाग्छ ।’ - भीम माबुहाङ प्रकृतिले फुर्सदमा जन्म दिएकी पृथ्वीका स-साना स्वर्गीक टुक्रा हुन् गुफा पोखरी ...
चार वर्ष अघि, म काठमाडौंको एक स्कुलमा पढाउँथे । एकदिन स्कुलमा एकजना गुरुआमाले नौं कक्षामा अध्ययनरत एक छात्रा विद्यार्थीलाई हातमा समातेर तान्दै स्टाफ रुमभित्र ल्याइन् । आक्रोसित गुरु’माले ती छात्रालाई निकै कराइन् । लाजले रातो अनुहार लगाएकी छात्रा घोप्टो परेर ‘आइ एम् सरी म्याम’ भनिरहिन् । ...
नेपालको संविधानले गाउँगाउँमा सिंहदरवार पुर्‍याउने मूल अभियानलाई आत्मसात गरेको परिपेक्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भई तीन तहको सरकारको स्थायी संरचना तयार तथा कर्मचारीहरुको समायोजन भई काममा सहजता समेत आईसकेको छ । संविधानको मर्म अनुसारको काम कारवाही स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघमा हुन नसकेक...
पढाइ छोडेर के भो त, त्यत्रो पैसा कमाइराछ !
हरे! यत्रो पढेर नि केही गर्न सकेको छैनौ? ह्या,कस्तो स्कोप नभाको विषय पढेको हो? म त मेरो छोराछोरीलाई डाक्टर बनाउने हो कुनैपनि हालतमा। को बस्छ नेपालमा कुनै फ्युचर नै छैन! कस्तो बुद्धि नभाको मान्छे त्यत्रो पढेर नि केही गर्न सकेन! त्यतिकै खेर गयो त्यत्रो पढेको। धेरै पढेर नि काम छैन मलाई ...
स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग हो र जनताको सबैभन्दा नजिकको जन प्रतिनिधि संस्था हो । जनतालाई कुनै पनि समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले पुग्ने ठाउँ भनेकै स्थानीय तहमा हो । त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु पर्छ र स्थानीय तह बलियो भएमा नै जनता बलिया हुन्छन् । जनआन्दोलन र संविधान निर्माणको बेला ...
नेपालको राज्य पुनसंरचनापछि पहिलोपटक जनगणना हुँदैछ । संघीय नेपालमा २०७८ सालको जेठ/असारमा हुने जनगणनाले आगामी दशकमा देश विकासको खाका तयार गर्ने प्रमुख आधार तयार गर्नेछ । यस बर्षको जनगणनाले व्यक्तिगत रुपमा करिब हरेक व्यक्तिका करिब ५२ वटा सूचना संकलन गर्नेछ भने सामुदायिक तर्फ करिब १ सयवटा नयाँ सूचनाह...
विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला विश्व साहित्यका गहन अध्येता थिए। त्यही भएर उनका कृतिमा विश्व साहित्यिक प्रवृतिको प्रभाव र छाप पाइन्छ। उनको अध्ययनको दायरा कति व्यापक थियो भन्ने सुन्दरीजल जेल बस्दा लेखेका डायरीबाट स्पष्ट हुन्छ। उनले जेलमा रहँदा जे जति साहित्यिक कृतिहरू अध्ययन गरे, तिनका विषयमा आफ्ना धारणा...
कोरोना महामारी र स्थानीय स्वास्थ्य सेवा
विश्व नै कोरोनाले आक्रान्त छ। बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैको मनमा त्रासले डेरा जमाएको छ। यो त्राससँग स्वास्थ्यकर्मीहरु एकल लडाईं लडिरहेका छन्। जब ठूला निजी अस्पताल र ठूला चिकित्सकहरुले कोरोनाका नाममा बिरामीको सामान्य उपचार बन्द गरे, त्यतिबेला ग्रामीण भेकमा बाहिरबाट आउने मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्...
एक कोरोना संक्रमितको सन्देश
आशिष खनाल मलाई कोरोना संक्रमण भयो भनेर सम्बन्धित सरकारी निकायबाट भदौ १ गते फोन आयो। म आफैंले कोरोना जाँच गराए पनि पोजेटिभ छ भने रिपोर्ट हात नपर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायमा खबर पुगिसक्ने रहेछ। स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट मलाई कुनै पनि लक्षण नभएकाले अस्पताल लान नमिल्ने कुरा आयो। म होम आइसोलेसनमै बसेँ...
प्रधानमन्त्री, नेकपा र राम मन्दिर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल असार २९ गते भानुजयन्तीको अवसरमा आयोजित समारोहमा रामायण महाकाव्यका नायक भगवान् राम नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिए। रामको जन्मस्थान चितवनको माडी नगरपालिका ७ र ८ हो भन्ने दाबी उनको थियो। यो अभिव्यक्तिले नेपाल-भारत दुवै देशमा ठूलो तरंग पैदा भयो र अझै ...
त्यही हो मेरो गाउँ…मुसाङ्खेल !
– भीम माबुहाङ, म जन्मेको माटो । हिंडेको बाटो । मातृ थलो । पितृ थलो । टेकेको भुगोल । म उभिएको डिल । समयसंगै लाप्पा खेल्दै हुर्केको ठाउँ । त्यहि गाउँमा म भालेसंगै उठथें । बाँदरहरुसँग दगुर्थें, पसिना निचोरदै पुछदै... । ती आँल्लाबारी, सिक्वाघारी र फेनाबुंङ जंगल मेरा दु:ख सुन्ने वनपात । त्यो...